Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Is-miidaamin Ah oo Kadhacay Magaalada Istanbuul ee Wadanka Turkiga.
Qarax Is-miidaamin Ah oo Kadhacay Magaalada Istanbuul ee Wadanka Turkiga.
Qof ayaa isku qarxiyay goob mashquul badan oo laga dukaamaysto oo ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxa qaraxan kudhintay ugu yaraan afar qof, sida ay mas’uuliyiintu sheegeen.
36 qof oo kale ayaa ku dhaawacantay, kuwaasi oo 12 ka mid ah ay ajaanib yihiin. Bamka ayaa ku qarxay meel u dhaw dhisme dowladeed oo ku yaala wadada wayn ee lagu magacaabo Istiqlaal. Ilaa iyo haatan cid sheegatay ma ay jirto in weerarkaas.
Axaddii lasoo dhaafay, qarax ka dhacay caasimadda Turkiga ee Anqara, ayaa waxaa ku dhintay 37 qof. Kooxda hubaysan ee maleeshiyada Kurdiyiinta ee TAK ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkii axadii.
Kooxda TAK, oo ka go’day kooxda la mamnuucay ee Kurdiyiinta ee PKK, ayaa sheegtay in weerarkaasi uu ahaa aargoosi ku aaddan howlgallada militeri ee uu Turkigu ka wado deegaanada ay ku badan yihiin Kuridiyiinta ee koonfur bari dalkaasi.
Bishii lasoo dhaafay, weerar bambaano ah oo lagu qaaday kolonyo milateri oo ka dhacay magaalada Anqara ayaa waxaa ku dhintay 28 qof waxaana ku dhaawacmay tobaneeyo qof oo kale. Bishii October 2015, in ka badan 100 qof ayaa waxay ku dhinteen laba qarax oo lala beegsaday isu soo bax nabadeed oo ka dhacayay magaalada Anqara.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in kooxaha argagixisada ay bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah sababtoo ah waxa ay ku guuldaraysteen halganka ay kula jiraan ciidammada ammaanka ee Turkiga. Waxa uu sheegay in weerrarada noocaas ah “ay sii kordhinayaan sida ay inooga go’an tahay in aannu la dagaallano argagixisada”.
Dowladda Turkiga ayaa horay ugu eedaysay Kurdiyiinta Suuriya inay ka dambeeyaan qaraxyada waxayna ku qaadday weerraro cirka ah oo aargoosi ah.